Qaahira Safarka Xalaal eHalal Safarka Mart oo leh Hagaha Safarka, Hoteelada Xalaasha & Dalxiisyada Xalaasha ah
Safarka Masar Xalaal
Qaahira Travel Xalaal
Xaaladda Covid-19 ee Masar
Qaahira Islamic waa magaca sida caadiga ah loo bixiyo xuddunta Qaahira, oo ah qayb ka mid ah magaalada oo si muuqata uga duwan degmada casriga ah ee Downtown iyo xaafadaha galbeedka.
Qaahira ee islaamku kama badna ama ka yar islaam ahaanta magaalada inteeda kale, laakiin waa aagga magaalada oo leh meelaha ugu waaweyn, uguna caansan islaamka. Qaar badan oo ka mid ah kuwaas oo ay soo kiciyeen khaliifadii Fatimid ee aasaasay magaalada Qaahira (waxaa ka horeeyay Fustat ama Old Qaahira). Si ka duwan xaafadaha Islaamka ee magaalooyinka kale, dadka, oo inta badan aad u liita, waxay ku sii noolyihiin taallo taariikhi ah iyo masaajidyo. Xarun aad u weyn oo mashquul ah oo cibaado, ganacsi, adeegsi iyo isu socod - waa mid u baahan in la arko booqdayaasheeda waxayna mudan tahay ugu yaraan dhowr maalmood sahaminta
Qaahira waa caasimadda Masar iyo, iyadoo wadarta guud ee dadka ku nool magaalada Qaahira ee weyn oo ka badan 16 milyan oo qof, ay tahay mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn Afrika iyo Bariga Dhexe labadaba (gobollada ay sida habboon ugu gudubto). Sidoo kale waa magaalada 19aad ee ugu weyn adduunka, waxayna ka mid tahay magaalooyinka adduunka ugu dadka badan.
Webiga Niil, Qaahira waxay caan ku tahay taariikhdeeda, oo lagu keydiyay magaalada islaamiga ah ee qadiimiga ah iyo goobaha Coptic ee Qaahira - oo Qaahira taariikhi ah lagu qoray Liiska Dhaxalka Adduunka ee UNESCO. Matxafka Masaarida ee ku yaal Bartamaha Magaalada waa in la arkaa, oo leh tiro aad u farabadan oo Masaaridii hore ah, sida looga dukaameysanayo suuqii Khan al-Khalili. Safar kasta oo Qaahira ma noqon doono mid dhammaystiran iyada oo aan la booqan Ahraamta Giza iyo Dhismaha Ahraamta Saqqara ee u dhow, halkaas oo booqdayaashu ay ku arki doonaan Ahraamtii ugu horraysay ee Masar oo uu dhisay naqshadeeye Imhotep oo loogu talagalay fircoonkii saddexaad ee Fircoon Djoser.
In kasta oo Qaahira si adag loogu dheggan yahay waagii hore, haddana waxay hoy u tahay bulsho casri ah oo firfircoon. Aagga Midan Tahrir ee ku yaal bartamaha magaalada Qaahira, oo la dhisay qarnigii 19aad intii lagu jiray xukunka Khedive Ismail, wuxuu isku dayay inuu noqdo "Paris on Nile". Waxa kale oo jira magaalooyin badan oo casri ah oo ay ka mid yihiin Ma'adi iyo Heliopolis, halka Zamalek uu yahay aag xasilloon oo ku yaal Jasiiradda Gezira, oo leh dukaamaysi suuq leh. Qaahira waxay kufiicantahay xilliga dayrta ama guga, marka cimiladu aysan aad u kululayn. Safarka felucca ee webiga Nile waa hab wanaagsan oo looga baxsado magaalada mashquulka badan, sidoo kale booqashada Beerta Al-Azhar.
Laga soo bilaabo kacaankii 2011 iyo kacdoonka ka soo horjeedka socda, dalxiisayaashu waxay ka qaxeen Qaahira ilaa xad. Tani waxay fursad u abuurtay waayo-aragnimooyin gaar ah oo ku saabsan Qaahira iyo Masar waxyaabihii khasnadaha dhaqameed oo aan lahayn dad badan. Kalidaa ka helida gudaha haramka hada waa macquul macquul ah. Siciradu sidoo kale way hooseeyaan.
Baadhitaano badan oo Masaarida Xalaal ah
Tilmaamaha Safarka Alexandria Xalaal
Safarka Luxor Xalaal
Hagaha Safarka Xalaasha ah
Tilmaamaha Safarka Sharm-el-Sheikh
Safarka Aswan Xalaal
Socdaalka Qaahira ee Islaamka oo ay ku jiraan Masaajidyo, Bazaar iyo Qado Xalaal ah
Qaahira - Masar
Ku booqo waxyaabaha muhiimka ah ee Qaahira Islamic booqashadan gaarka ah. Joogsiga koowaad waa qalcadda Saladin iyo masaajidda Maxamed Cali iyo Ibnu Qalaaun.
Socdaalkii Islaamka ee Qaahira oo ay la socdaan Cunto Xalaal ah iyo duco
Booqo Masaajidka Al Azhar, Masjidka Al Husseen, Masjidka El Aqmar adoo booqanaya Khan AL Khalili Bazaar. Qado Xalaal ah ayaa la qaadan karaa salaada kadib ama kahor.
Dhadhaminta & Karinta Cunnada Xalaasha ah ee Masaarida ee Qaahira
Baro sida loo kariyo cunnada Xalaal ee Masaarida ah iyadoo la adeegsanayo qof maxalli ah booqasho maalinle ah oo culus oo lagu marayo Qaahira, aragna nolol maalinle ah oo ku jirta jikada reer Masar.
Amarante Ahraamta Qaahira
Huteel Barcelo Qaahira
Hotel Bostan Qaahira
Qaahira Marriott Hotel & Cumar Khayyam Casino
Cairokhan Hotel Qaahira
Cataract Resort Qaahira
Concorde El Salam Hotel Qaahira
Hotel Concorde Dokki Qaahira
Conrad Hotel Qaahira
Delta Pyramids Hotel Qaahira
El Gezirah Qaahira
Fairmont Heliopolis Hotel Qaahira
Fairmont Nile City Hotel Qaahira
Hotelka Fairmont Towers Heliopolis
Hoteelka Afar Xilliyeed At Nile Plaza Qaahira
Afar Xilliyo Hoteel Qaahira Oo Ku Yaal Degggii Koowaad
Dahabka Tulip Flamenco Hotel Qaahira
Grand Ahraam Hotel Qaahira
Gresham House Hotel Qaahira
Huteel City faraxsan Qaahira
Hoteelka Havana Qaahira
Hilton Qaahira Xarunta Ganacsiga Dunida ee Degan Hotel
Hilton Qaahira Zamalek Residences Hotel
Hilton Pyramids Golf Resort Qaahira
Holiday Inn Qaahira Citystars
Fasaxyada Express Hotel & Terrace Qaahira
Horizon Pyramids Hotel Qaahira
Hotel Novotel Qaahira Airport
Iberotel Qaahira Hotel & Casino
Hoteelka InterContinental Qaahira Semiramis
InterContinental Hotel Citystars Qaahira
JW Marriott Hotel Qaahira
Kempinski Nile Hotel Garden City City Qaahira
King Hotel Qaahira
Le Meridien Hotel Heliopolis Qaahira
Le Meridien Pyramids Hotel Qaahira
Bariga Dhexe Ahraamta Hotel Qaahira
Moevenpick Resort Ahraamta Qaahira
New Garden Palace Hotel Qaahira
Oasis Hotel Qaahira
Om Kolthoom Hotel & Tower Qaahira
Faraaciinta Doki Hotel Qaahira
Madaxweyne Hotel Qaahira
Radisson Blu Hotel Qaahira Heliopolis
Ramses Hilton Hotel Qaahira
Safir Hotel Qaahira
Shepheard Hotel Qaahira
Hotel Sheraton Qaahira & Casino
Sofitel Qaahira El Gezirah Hotel
Hoteelka Sonseta Tower & Casino Qaahira
Switzerland Inn Hotel Qaahira
Qaahira ee hostel-ka Australia
Tiba Ahraamta Hotel Qaahira
Zoser Partner Hotel Qaahira
eHalal Safarka Mart > Safarka Masar Xalaal > Qaahira Travel Xalaal
Tilmaamaha Safarka ee Bordeaux Xalaal